कांग्रेसको गन्तव्य- विविधा - कान्तिपुर समाचार
नेतृत्वले आन्तरिक रूपबाट सुव्यवस्थित, संगठनात्मक रूपबाट सुदृढ र नीतिगत रूपमा सु–स्पष्ट पार्टी बनाएर सबै चुनौतीलाई कुशलतापूर्वक सामना गर्नसक्ने योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ ।
वैशाख १८, २०७५ दीपक गिरी
काठमाडौँ — सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धको अत्यपछि विश्वविख्यात नेता तथा बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल त्यहाँ सम्पन्न आमचुनावमा पराजित हुनपुगे । त्यत्रो भीषण महायुद्धमा बेलायतलाई विजयी बनाएका नेता निर्वाचनमा पराजित हुनु चानचुने कुरा थिएन ।
बेलायती मतदाताले चर्चिललाई अनावश्यक रूपमा देशलाई युद्धमा धकेलेको, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशायी पारेको र लामो समयसम्म नागरिकलाई युद्धको मनोवैज्ञानिक त्रासदीमा बाँच्न विवश तुल्याएको जस्ता गम्भीर आरोप लगाए । तिनै चर्चिल ५ वर्षपछिको निर्वाचनमा पुन: विजयी भए । यो प्रसंग किन उद्धृत गरिएको हो भने नेपालमा भर्खरै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर यो ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न गराउने पार्टी नेपाली कांग्रेस पराजित भयो । आखिर किन यस्तो भयो ? यतिबेला यो विषय नेपाली कांग्रेसभित्र र बाहिर सर्वत्र बहसको विषय भएको छ । कांग्रेसको जारी बैठकमा समेत यो नै प्रमुख मुद्दा बन्यो ।
१३ आैं महाधिवेशनपछि कांग्रेसको निर्वाचित नेतृत्व अहिले आफ्नो कार्यकालको करिब–करिब मध्यान्तरमा छ । अहिलेको नेतृत्वले २ वर्ष पुरा गरेको छ भने पार्टीको विधान अनुसार अब २ वर्ष बाँकी छ । कारणवश महाधिवेशन गर्ने समय १ वर्ष थप्नसक्ने विधानमा प्रावधान छ । यो प्रावधानलाई प्राय: सबै महाधिवेशनमा उपयोग गर्ने प्रचलन छ ।
बाँकी समयलाई पार्टी नेतृत्वले पार्टीको संगठन सुदृढीकरण र व्यवस्थापनमा सही किसिमबाट प्रयोग गर्ने हो भने कांग्रेस फेरि पहिलेकै अवस्थामा आउनेमा कुनै शंका छैन । अबको संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो पार्टी हुने सुनिश्चित नै छ । तर त्यसका लागि अरू कमजोर भएमा वा अरू पार्टी फुटेमा हामी बलियो हुन्छौं भनेर च्याँखे थापेर बस्ने होइन । प्रतिपक्षी पार्टी बलियो भए पनि वा दुई प्रतिपक्षी पार्टीको एकता कायमै रहे पनि हामी सबैभन्दा अगाडि हुन्छौं भन्ने दृढ संकल्प र आत्मबल लिएर अघि बढ्नुपर्छ । यो काममा निश्चय नै पार्टी सभापतिको नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ । यसमा पार्टी सभापतिलाई पार्टीका अन्य पंक्तिबाट बलियो सहयोग हुनुपर्छ । र यसमा कांग्रेसका तमाम कार्यकर्ता पनि इमानदार, अनुशासित र मर्यादित हुन आवश्यक छ ।
पार्टीभित्र गुट/उपगुटको प्रवृत्ति कायमै रहने, गुट–उपगुटले पार्टी सभापतिलाई थर्काउने, घुक्र्याउने र पार्टी सभापतिले पनि जसले थर्काउँछ, घुक्र्याउँछ, त्यसको कुरा मान्दै जाने परम्परा देखियो । यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीलाई फाइदा पुर्‍याउँदैन । यहाँसम्म कि गुट–उपगुटलाई चित्त बुझाउन पार्टी सभापतिले पार्टीको विधान विपरीत संसदीय समिति र कार्यसम्पादन समिति बनाउनुभयो । विधान विपरीत बनाउनुमा यसको सबै दोष पार्टी सभापतिलाई दिइयो नै, तर संसदीय समिति र कार्यसम्पादन समिति विधान विपरीत बनाउनुमा दुवै पक्षको मिलेमतो छ । यसमा दुवै पक्षको उत्तिकै सहभागिता छ । मिलेमतोबाटै विधान उल्लङ्घन गर्ने काम भएको छ । विधान उल्लङ्घन हुनुमा अर्को पक्ष पनि जिम्मेवार छ । तर पनि विधान मिच्ने काममा नेतृत्वदायी भूमिका पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूकै बढी छ । निर्णयहरू विधानसम्मत हुनुपर्ने र विधानको पालना गर्नुपर्ने कुरामा पार्टी नेतृत्व प्रारम्भदेखि नै सचेत र सजक हुनुपथ्र्यो । तर त्यस्तो सजगता अपनाएको देखिएन । दुभाग्र्य नै भन्नुपर्छ, विधान लत्याउने काम सुरुदेखि नै भएको छ ।
त्यसैले विगतका गल्ती–कमजोरी सच्चाउँदै पार्टीलाई विधान अनुरूप सञ्चालन गर्ने र कार्यशैलीमा सुधार गरी सक्रियता ल्याउने हो भने अझै पनि बाँकी रहेको यो समयमा पार्टीलाई बलियो बहुमत प्राप्त पार्टी बनाउन सकिन्छ । यो चुनावमा अपेक्षाकृत पार्टी बलियो हुन नसक्नुमा पार्टी नेतृत्व जिम्मेवार छ नै । यसमा अरू कारणहरूको पनि समीक्षा खोज्नुपर्छ । विगतमा पार्टी नेतृत्वको ढिलासुस्ती भएकै हो । पदाधिकारी मनोयन, विभागहरूको पूर्णता र अन्य पदमा गर्नुपर्ने मनोनय पार्टीको विधान अनुसार समयमै गरिएको भए आज हामी पार्टी हार्नुमा एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई मात्रै दोष दिएर बस्नुपर्ने थिएन । पार्टीको ‘पोजिसन’ निश्चय नै अहिलेको भन्दा बलियो हुन्थ्यो । पार्टी नेतृत्व वाम गठबन्धनसँंग सुरुदेखि नै सतर्क भएन । एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्न सक्दैनन् भन्ने भ्रम पार्टी नेतृत्वलाई रहिरह्यो । यही भ्रमबाट कांग्रेस नेतृत्वले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही महत्त्वपूर्ण ठाउँमा माओवादी केन्द्रलाई सहयोग गर्‍यो । यसमा पनि पार्टी नेतृत्व चुकेको देखिन्छ । यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्दै जाला ।
यो अवधिमा पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूलाई चुस्त–दुरुस्त तथा बलियो बनाउन कांग्रेस नेतृत्व चुकेको देखिन्छ । चुनावको बेला पार्टीको पक्षमा जनमत बढाउन तथा पार्टीको लागि माहोल सिर्जना गर्न भ्रातृ संगठन तथा शुभेच्छुक संगठनहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विपक्षी दलहरूले चुनावको बेला पार्टीको पक्षमा भोट बटुल्न आफ्ना भ्रातृ संगठन र भ्रातृ संगठनका कार्यकर्ताहरू राम्रोसँंग प्रयोग गरे । तर दुर्भाग्यवश नेपाली कांग्रेसका अधिकांश भ्रातृ संगठनहरू यो चुनावको बेला कांग्रेसको लागि राम्रोसंँग परिचालन हुन सकेनन् । भ्रातृ संगठनका अधिकांश पदाधिकारीहरू नै टिकट पाउन दौडधुप गर्नमै समय बिताए । भ्रातृ संगठनहरू केही मान्छेका इसारामा चल्ने संगठन भए ।
शक्तिशाली भ्रातृ संगठन मानिएका नेविसंघ र तरुण दल पनि पार्टीको भावना अनुसार पार्टीलाई बलियो र लोकप्रिय बनाउन पार्टीको हितमा राम्रोसँंग प्रयोग हुन सकेनन् । अहिले पनि यही स्थिति कायमै छ । भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूमा राम्रा मान्छेलाई ल्याउनुभन्दा पनि गुटकाहरूलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूमा रहेकोले यो स्थिति आएको हो । यस्तो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । नेतृत्वले संगठन हेर्नुपर्छ, पार्टी हेर्नुपर्छ, ।
भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूमा गुटका मान्छे परे कि परेनन् भन्ने सोचले गुटका मान्छेहरूले अवसर त पाउलान्, तर यसले पार्टीलाई फाइदा पुर्‍याउँदैन । यसबाट भ्रातृ संगठनहरू नाम मात्रका हुन्छन् । नाम मात्रका भ्रातृ संगठनहरूले पार्टीलाई के ऊर्जा दिन सक्छन् ? भ्रातृ संगठनहरूलाई चुस्त–दुरुस्त, क्रियाशील र जिम्मेवार बनाउनु पार्टी नेतृत्वको लागि अवसर पनि हो । अधिवेशन नभएका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूमा अधिवेशन चाँडोभन्दा चाँडो गर्ने, रिक्त रहेका पदहरूमा सक्षम र काम गर्न सक्नेहरूलाई राख्ने, निष्क्रिय र काम गर्न नचाहने, नगर्नेहरूलाई पदमुक्त गर्ने साहस नेतृत्वले देखाउन सक्नुपर्छ ।
विधानत: पार्टी सभापतिले अब गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । त्यसमा पनि पार्टीलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजान विधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले पनि नेपाली कांग्रेस पुरानै संरचनामा चलेको छ । प्रादेशिक समितिहरू कांग्रेसले बनाएको छैन । किनभने प्रदेशका संरचना अहिलेको विधानले मानेको छैन । पछिल्लो २ वर्षमा नेपाली कांग्रेसको विधानको बेवास्ता भएको छ । यो बेवास्ता गर्ने काम अहिलेको नेतृत्वबाट पनि भएको छ । निश्चय नै विधानको बेवास्ता गर्ने काम पूर्णरूपमा बन्द हुनुपर्छ । यहाँसम्म कि विधान बेवास्ता गर्ने काममा पार्टीका दुई पक्षबीच गुटबन्दी भएको छ । त्यसैले विधान बाहिर गई गरिएका निर्णयहरू सच्याउन अब पार्टी नेतृत्वले हिम्मत देखाउनैपर्छ । पार्टीभित्र सिर्जिएका यस्ता गुट–उपगुटहरू पार्टी हितका लागि खतरनाक सावित हुने गर्छन् ।
विगतको अनुभवले पनि यस्तै देखाएको छ । गुट–उपगुट मौलाउँदै जानु भनेको पार्टी कमजोर हँुदै जानु हो र पार्टीभित्रको अनुशासनहीनता बढ्दै जानु हो । अनुशासनहीनताले पार्टीमा विकृति ल्याउँछ । अनुशासनहीनतालाई रोक्न पार्टी नेतृत्वले साहस देखाउनुपर्छ । गत संसदीय निर्वाचनमा पार्टीको अनुशासनलाई खुलेआम चुनौती दिँदै पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउने काम पार्टीभित्रकै केही नेताबाटै भएका छन् । पार्टी नेतृत्वबाट उल्टै अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्ने हो भने यसले पार्टीलाई भोलि कहाँ पुर्‍याउला ? कल्पना गरांै । त्यसैले पार्टीभित्रको अनुशासन र मयार्दालाई कायम राख्न पार्टी नेतृत्वले खुट्टा कमाउनु हँुदैन, साहसिक कदम चाल्नैपर्छ । अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेहरू आफ्नै व्यक्ति छन् भने पनि उनीहरू ‘मेरा मान्छे’ होइनन् भन्ने पार्टी नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ । यस्तो भावना पार्टीका अन्य नेताहरूमा पनि जाग्नुपर्छ ।
क्रियाशील सदस्यका सम्बन्धमा पार्टी विधानमा गरिएको बन्दोबस्त र मापदण्डलाई मात्र पालना गर्ने हो भने पनि धेरै समस्या स्वत: समाधान हुन्छ । पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त, उद्देश्य र लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध पार्टीका लागि निष्ठापूर्वक काम गर्न चाहने व्यक्तिमात्रै पार्टीको क्रियाशील सदस्य हुनसक्ने व्यवस्थालाई अक्षरश: पालना गरिनु पार्टीका लागि दूरगामी हितको विषय हुनसक्छ ।
हामी इतिहासको महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा छौं । हाम्रो बैठकले ऐतिहासिक निर्णय लिने नै छ । राजनीतिलाई नयाँ अध्यायमा प्रवेश गराउन सक्ने २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमार्फत संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्नसक्ने र आन्दोलनमार्फत स्थापना गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी तीनै तहको निर्वाचन गराउन सक्ने सामथ्र्य भएको पार्टीले निर्वाचनमा अपेक्षाकृत नतिजा हासिल गर्न नसक्दा पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा गहिरो निराशा, छट्पटी र तनाव देखिएको छ । यो चिन्तालाई हटाएर पार्टीलाई आन्तरिक रूपबाट सुव्यवस्थित, संगठनात्मक रूपबाट सुदृढ र नीतिगत रूपमा सु–स्पष्ट बनाएर सबै चुनौतीलाई कुशलतापूर्वक सामना गर्नसक्ने योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । वास्तवमा हाम्रालागि वर्तमान अवस्था एक किसिमको ऐतिहासिक अवसर हो । यो अवस्थालाई सदुपयोग गर्न चुक्नु हुँदैन । यसका लागि पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा उत्साहको सञ्चार गरी नयाँ रक्तसञ्चार हुने निर्णय पार्टीले लिन सक्नुपर्छ ।
गिरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्।
प्रकाशित : वैशाख १८, २०७५ ०८:००
विकराल बन्दै प्रसूति हिंसा
ग्रामीण भेगका गर्भवती शल्यक्रिया सेवाको पहुँचबाट वञ्चित भई अकालमा आफ्नो र गर्भे शिशुको ज्यान गुमाउन बाध्य छन् भने सहरका शिक्षित र सम्पन्न महिला प्रसूति हिंसाको सिकार भएका छन् ।
वैशाख १८, २०७५ डा. लक्ष्मी तामाङ
काठमाडौँ — वैशाख पहिलो साता स्वास्थ्यकर्मी महिलाहरूको एक प्राज्ञिक भेलामा छलफल गर्ने क्रममा थाहा भयो, बच्चा भइसकेका ८ स्वास्थ्यकर्मी महिलामध्ये ५ जनाले शल्यक्रिया गरी सन्तान जन्माएका रहेछन् । शिक्षित, सहरी र सम्पन्न महिला वर्गमा आधुनिकीकरणसँगै महिलाहरू प्राकृतिक रूपमा सन्तान उत्पादन गर्ने कार्यमा अशक्त, असमर्थ र असक्षम हुँदै गएका छन् ।
दिन–प्रतिदिन उनीहरूको जैविक प्राकृतिक शक्तिमा ह्रास आइरहेको छ । हाम्रा आमा र हजुरआमाहरू प्राय:जसो अशिक्षित, ग्रामीण भेगमा बस्ने र विपन्न वा मध्यम वर्ग भएर पनि कति सशक्त र सक्षम थिए, प्राकृतिक रूपमै सन्तान उत्पादन गर्न सक्थे । आधुनिक चिकित्सा सेवाबाट वञ्चित भएकाले गर्दा उनीहरू घरपरिवार, आफन्त र छरछिमेकका महिलाहरूको सहयोगमा घरैमा प्रसूति गराउन बाध्य थिए । जसले गर्दा उनीहरू प्राय: आमा बन्ने क्रममा कि आफू मर्थे कि आफ्नो शिशुलाई यस संसारमा आउनु अघि नै गुमाउँथे । विशेषत: ग्रामीण भेगका विपन्न महिलाहरूमा यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति अझै छ ।
शल्यक्रियाद्वारा सन्तान उत्पादन गर्ने दर बढेको बारे प्राय: प्रसूति रोग विशेषज्ञ चिकित्सक र महिला स्वास्थ्यकर्मीहरू भन्ने गर्छन्, ‘गर्भवती महिला र उनको परिवारजन स्वयंले शल्यक्रियाद्वारा सन्तान उत्पादन गर्न माग गर्ने गर्छन् । प्राकृतिक रूपमा सन्तान जन्माउने जोखिम लिन चिकित्सक र गर्भवती दुवैले चाहँदैनन् ।’ यस्ता तर्कलाई अध्ययन, अनुसन्धानले भने मिथ्यांक र भ्रामिक प्रचारबाजी भन्छ । नेपाल लगायत विभिन्न देशहरूमा गरिएको अनुसन्धान अनुसार गर्भवती महिलाकै अनुरोधमा शल्यक्रियाद्वारा बच्चा जन्माइएका घटना बढीमा बढीमा १, २ प्रतिशतमात्र छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार गर्भवती महिलाले शल्यक्रिया गरी सन्तान जन्माउन माग गरे पनि चिकित्सक टोलीले चिकित्सा कारण बाहेकका हकमा शल्यक्रिया गरी महिला र नवशिशुको ज्यानमा जोखिम मोल्ने कार्य गर्नु हुँदैन ।
अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, स्वीडेन र रूसजस्ता विकसित देशका महिला जो विभिन्न कारणले नेपालमा बस्दै आएका छन्, उनीहरूको देखाइ र भोगाइ भने पृथक छ । कतिपय ती महिला घरमै प्राकृतिक रूपमा सन्तान जन्माउनका लागि गर्भावस्थाको समयमा सम्पर्क गर्छन् । अस्पताल गई सन्तान उत्पादन गर्न किन नचाहेको भनी प्रश्न गर्दा प्राय:ले भन्छन्, ‘अस्पतालमा बच्चा जन्माउन गयौं भने चिकित्सक र नर्सहरूले मनोमानी ढङ्गले हाम्रो शरीरमाथि खेलबाड गर्छन्, त्यहाँ हाम्रो कुनै सुनवाइ हुँदैन, नियमित रूपमा जे गर्दै आइरहेका छन्, सोही गर्छन्, जुन म चाहन्न । त्यसैले दक्ष प्रसूतिकर्मी, मिडवाइफहरूको सहयोगमा घरमै सुरक्षित ढङ्गले बच्चा जन्माउन चाहन्छु, जहाँ मेरो इच्छा अनुसार मिडवाइफहरूले सहयोग गर्छन् ।’
महिला अधिकार र हिंसाका कुरा गरेर नथाक्ने कतिपय महिला अधिकारवादीहरू देखेर दया लागेर आउँछ– जबकि उनीहरू स्वयंले आफ्नो शरीर, प्रजनन, यौनिकता र सन्तान उत्पादन गर्ने अधिकार पूर्णरूपमा उपयोग गर्न असमर्थ र असक्षम भई स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । ग्रामीण र पिछडिएका महिला वर्गहरूको अधिकारका लागि भन्दै आवाज उठाइरहेका छन् । जबसम्म शिक्षित, सहरी र सम्पन्न महिलाहरू स्वयंले आफ्नो शरीर, प्रजनन, यौनिकता र सन्तान उत्पादन गर्ने अधिकार पूर्ण उपयोग गर्न सक्दैनन् वा आफूलाई असमर्थ मान्ने/ठान्ने गर्छन्, तबसम्म उनीहरू स्वयं सशक्त भएका मानिन्नन् ।
प्राकृतिक रूपमै महिला वर्ग सन्तान उत्पादन गर्ने सशक्त लिङ्गको रूपमा पहिचानसहितको जिम्मेवारी प्राप्त जाति हुन् । तर आधुनिकीकरणसँगै महिला स्वयंले आफूलाई सन्तान उत्पादन गर्न अशक्त सिद्ध गर्दै आइरहेका छन्, सहरी महिलाहरूले । अर्कोतिर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले समेत उनीहरूकै चाहना अनुसार हामी शल्यक्रिया गर्न बाध्य छौं भन्दै पेसागत नैतिकता बाहिर गई गर्ने कुतर्क पनि उत्तिकै टिठलाग्दो छ ।
अल्पविकसित सामाजिक मानसिकता भएको हाम्रोजस्तो पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रसित राष्ट्रमा जुनसुकै सामाजिक अन्यायको घटनामा दोषजति पीडित पक्षलाई दिने गरेको पाइन्छ । यो शल्यक्रिया गरी बच्चा जन्माउने महिलाका हकमा पनि लागू हुन्छ । प्रसूति हिंसाको सिकार बनेका छन्, यहाँका सहरी महिला । अनेक बहानाबाजीमा उनीहरूलाई अनावश्यक चिरफार गरी भविष्यमा उनीहरूको सन्तानलाई दम, मधुमेह, मोटोपनजस्ता दीर्घरोगको खतरा निम्त्याइन्छ । कृत्रिम र असामान्य परिस्थिति सिर्जना गरी महिलालाई अशक्त बनाइन्छ, अनि त्यसको दोष फेरि उनीहरू स्वयंलाई दिइन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार १० प्रतिशत गर्भवतीलाई बच्चा जन्माउने क्रममा शल्यक्रिया आवश्यकता पर्छ । गर्भवतीको शारीरिक परिस्थितिले ५ प्रतिशत र अर्को ५ प्रतिशत गर्भे शिशुको असामान्य स्थितिले गर्दा यस्तो आवश्यकता पर्छ । कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्र वा स्वास्थ्य संस्थामा बढीमा १५ प्रतिशतले शल्यक्रिया गरी बच्चा जन्माउने गरेका छन् भने त्यो अधिकतम स्वीकार्य दर हो । ‘यदि त्योभन्दा बढी दरमा चिरफार गरी बच्चा जन्माइन्छ भने अनावश्यक आर्थिक प्रलोभनमा परेर शल्यक्रिया गरेको भन्ने बुझिन्छ,’ सङ्गठनले भनेको छ, ‘कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा ५ प्रतिशतभन्दा कमले शल्यक्रियाबाट बच्चा जन्माउने गर्छन् भने त्यहाँ उक्त सेवाबाट बञ्चित भई आमा बन्ने क्रममा गर्भवतीको मृत्यु भइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ ।’
शल्यक्रिया गरी सन्तान उत्पादन गर्नु भनेको गर्भवती महिला र नवशिशु दुबैलाई जोखिममा पार्नु हो । तर अज्ञानताले गर्दा शल्यक्रिया सुरक्षित हो भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ । सन् २०१६ को नेपाल जनसांख्यिकीय तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा जम्मा ९ प्रतिशत महिलाले शल्यक्रिया गरी बच्चा जन्माउने गर्छन् । ग्रामीणमा ६ प्रतिशत र सहरमा १२ प्रतिशत महिलाले शल्यक्रियाको माध्यमबाट बच्चा जन्माउँछन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा १२ प्रतिशत र निजीमा ३५ प्रतिशत महिलाले शल्यक्रियाद्वारा सन्तान जन्माउँछन् । त्यसैगरी एसएलसी वा सोभन्दा माथि अध्ययन गरेका २० प्रतिशतले र अशिक्षित ५ प्रतिशतले मात्र शल्यक्रिया गरी बच्चा जन्माएको देखिन्छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न २८ प्रतिशतले र विपन्न दुई प्रतिशतले मात्र त्यसरी शल्यक्रिया गरेको पाइन्छ । एकातिर ग्रामीण भेगका गर्भवती शल्यक्रिया सेवाको पहुँचबाट बञ्चित भई अकालमा आफू र गर्भे शिशुको ज्यान गुमाउन बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ सहरमा शिक्षित र सम्पन्न महिला प्रसूति हिंसाको सिकार भएका छन् ।
सहर केन्द्रित विभिन्न निजी तथा अर्ध गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने महिलाको तथ्यांक केलाउँदा कहालीलाग्दो परिस्थिति देखिन्छ, जसमा यो दर ४६ देखि ९० प्रतिशत पाइन्छ । कतिपय यस्ता अस्पतालका प्रशासकहरूका अनुसार उनीहरूको प्रसूति वार्ड सबैभन्दा बढी आर्जन गर्ने वार्ड हो । यस्तो कहालीलाग्दो तथ्यांकप्रति सरकारले कुनै पनि रणनीतिक सोच र धारणा व्यक्त गरेको छैन । यसको रोकथाम नगरेमा आगामी दिनमा प्रतिफल पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ मानव तथा महिला अधिकारकर्मी लगायतका उपभोक्त मञ्च र सुरक्षित मातृत्व सेवा क्षेत्रमा कार्यकरत पेसाकर्मी, प्रजनन तथा मातृत्व स्वास्थ्य अधिकारकर्मी र अभियन्ता पनि यसप्रति मौन छन् । शिक्षित, सहरी र सम्पन्न वर्गका गर्भवती आफैं प्रसूति हिंसाबाट पीडित छन् भने अज्ञानता र अचेतनाले गर्दा चुइँक्क एक शब्द पनि बोल्न नसक्ने दूरदराजका महिलाको हालत के होला ?
प्रकाशित : वैशाख १८, २०७५ ०७:५९